Barrier-isina bhodhi mutambo tsananguro mavhidhiyo: Sangano rinotangisazve chirongwa - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 3, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Muna Ndira 2021, chirongwa ichi chaigona kutangwa zviri nyore. Sangano rinoudza mitambo yevadiki nevakuru. Kutamba dhijitari kune chinangwa chekugonesa kusangana uye kutora chikamu munharaunda uye izvi zvakare nedhijitari.
Kutamba digitally digitize zvinopihwa zvekirabhu munzvimbo dzakakosha: "Kudzidziswa uye kuchinjika kwemitambo yedhijitari yevakuru uye vanhu vakaremara", "inosvikika webhusaiti" uye "kugadzirwa kwezvinhu zvinosvikika zvekutsanangura mitemo yemitambo yeparlor" (mavhidhiyo, mawebhusaiti, PDFs). Izvi zvinoita kuti vanhu vabatane "pamhepo" zvisinei nezera ravo uye kugona kwavo nekuda kwemikana yakaenzana yedhijitari yakagadzirwa nenzira iyi. Chinonyanya kutariswa kune vanhu vakuru kuitira kuti vagone kuchinjana kutamba nevanhu vadiki uye nekudaro vabatsire mukuvandudza hupenyu hwavo.
Shanduro itsva yepurogiramu nekuda kwemari yetsika
Iyo purojekiti inogona kuitwa zviri nyore nedhijitari kutanga kwa2022 kuburikidza nembiru dzakati wandei: Mari kubva kune postcode lottery yakagonesa kubata uye kurongeka kweprojekiti. Mushandirapamwe wekupa muna Zvita 2020 kuSparkasse Rottal-Inn wakabva waita kuti zvikwanise kugadzirisa mari yevagadziri venhau, mubhadharo wekuzvipira uye hardware uye software. Mari yekuwedzera yakaitwa pachirongwa ichi yakazovharwa nerubatsiro rwe1.500 euros kubva kuSpiel des Jahres e. V. nezvimwe zvipo zvedunhu.
Basa racho rakapedzwa zvinobudirira. Asi kwanga kusiri magumo, nekuti pane nhau dzakanaka: Nerubatsiro rwakabva kuNEUSTART KULTUR kubva kuFederal Association of Socio-Culture, takakwanisa kuitanga patsva nedigital muna Kukadzi. Chirongwa ichi chinogona kuenderera mberi kusvika angangoita Gunyana 2022. Mazano anogona kuitwa nyore nyore nedigital uye zvachose ari kutogadzirirwa.
Madhiri emitambo akanyorwa pano: https://www.jungundaltspielt.de/eventmanager/. Kana zvasvika kune zvinopihwa zvemitambo, mitsva - inowanikwa nyore - mitambo iri kuunzwa kuti ive nechokwadi chekusiyana. Nenzira iyi, isu tinowedzera kuenzana kwedhijitari uye mhando yehupenyu kune vanhu vane matambudziko nekuwana dhijitari nenzira yekutamba.
Ruzivo rwekudzidziswa kwedhijitari: https://www.jungundaltspielt.de/digitale-schulungen/. Digital inopa uye makosi ekudzidzisa anobatsira vanhu, zvisinei nezera uye kugona, kusangana uye kupedza nguva yekutamba vari pamwechete.
Parizvino, mavhidhiyo mashanu anotsanangura akagadzirwa emitambo iyi: Splendor, Qango, LAMA, Memoaaar! uye Detective Club. Iyi mitambo yakagamuchira chisimbiso cheGenerations Play uye yakanakira kutamba-kwechizvarwa. Kutariswa kunopihwa kumutauro wakapfava, tsananguro dzinononoka uye zvinyorwa zvidiki mune yakakura kwazvo pfungwa yekuwanikwa. Mamwe mavhidhiyo ave kuda kupera.
Mhinduro pamavhidhiyo yaigara yakanaka. Mumwe munhu anonyora kuti: “Mavhidhiyo aya anobatsira vatezvara vangu zvikuru!” Mumwewo anoti: “Nemhaka yebasa randinoita pamusha wevakaremara uyewo ndichiita basa nevakwegura, ndinogara ndichitsvaka akakodzera. “zvinobatika” zvinhu. Kuburikidza nemavhidhiyo akajeka-nhanho-nhanho, vatori vechikamu vanogona kudzidza mitemo yemutambo ivo pachavo. Nenzira iyi, kuzvimirira uye kuzvivimba zvinogona kusimbiswa nenzira inoshamisa uye inotaurika. Ichokwadi kune motto: "Ndibatsire kuti ndizviite ini".
Uyezve, foto gallery yakagadzirwa pamwe nePDF yekurodha/kudhinda. Kune nzira dzakasiyana-siyana dzekudzidza mitemo yemutambo. Rule tsananguro pa: www.jungundaltspielt.de.
Haba 300932 - Karuba, zano uye bhodhi mutambo kune yese ... * 23,98 EUR tenga
Kare Sifu ikozvino zvakare mukutengesa kwekutengesa: Big update
Inotevera Blade Runner: Peni nePepa ine hasha yekuunganidza mari kutanga
Ongororo yemutambo webhodhi: Porto naOrlando Sá - Mutambo wekuisa pane nyaya yekuvaka dzimba
Playstation 5: Nguva pfupi isati yaburitswa, mitambo yePS4 ichagashira gadziriso yenguva yekurodha